andindonin-doza ny firenena ka sao mila atsahatra aloha ny fanovana mpikambana ao aniovon’ny governemanta. Ny fanjakana amin’izao dia mivory mitady vola etsy sy eroa nefa raha miroso amin’ny “remaniement” dia lasa mitombo indray ny fandaniana. Marihina fa rehefa nisaorana ny minisitra iray, hoy izy, dia tsy maintsy mandoa karama sy tombontsoa telo volana ny fitondrana. Rehefa misy minisitra miditra ihany koa, dia misitraka izay. Handoa vola in-droa ve isika nefa amin’izao mila vola hanampiana ireo traboina ? Sao tokony hiandry aloha vao miroso amin’izany, hoy hatrany ny fanazavana.